Android လုလင်: November 2012
Clock Tower 3D Live Wallpaper v1.02 APK
Clock Tower 3D Live Wallpape
Working 'Open' button
ရေးတဲ့အချိန် 1:04 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
- Just swap your phone to control moto direction
- Tap the screen to accelerate the moto
- In this game you can ride the motorcycle shuttle in outskirts, forest, snow mountain,bridge. More and More maps and motos will coming soon
ရေးတဲ့အချိန် 9:57 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
Speedway 2012 v1.10
ဒီဂိမ်းက ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း ဆိုက်ကယ်မောင်းချင်သူတွေ အတွက် အသစ်ထွက်ဂိမ်းလေးပါ
Copy ‘com.vividgames.speedwaygp2012′ folder to ‘/sdcard/Android/obb’
ရေးတဲ့အချိန် 6:07 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
အလန်းဇယား! Live Wallpaper
အလန်းဇယား! Live Wallpaper လေးဟာ
Live wallpaper တစ်ခုထက် သာလွန်တဲ့
Wallpaper ပေါ်တွင် မိမိ နာမည်အား မြန်မာစာဖြင့်
တင်၍ ရခြင်း အပြင် အသဲ ပုံ မျှားနတ်မောင် ပုံ
ကြယ်တာရာ ပုံများ ဖြင့် ရောင်စုံ ရှပ်ပြေးများ
ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အပြင် ဒီ Wallpaper လေးကို
မြန်မာစာဖြင့် ပြန်လည် ပြုပြင်ထားသဖြင့် သုံးရ
အောက်က Link မှာ Download ဆွဲပါ
ရေးတဲ့အချိန် 5:50 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
U8812D ကို Root မလုပ်ပဲ မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း နှင့် Root လုပ်နည်း
အခုပြောပြပေးမှာကတော့ လူတိုင်းမျှော်လင့် စောင့်စားနေတဲ့ Huawei U8812D ကို root မလုပ်ပဲမြန်မာဖောင့်ထည့်နည်းနှင့် root လုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ root မလုပ်ပဲ CWM recovery ကို သွင်းပြီးတော့ ကျွန်တော် တို့ဖန်တီးထားတဲ့ HWMMfont.zip နဲ့ CWM ကနေ update လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
လိုအပ်သောဖိုင်ကို ဒေါင်းပါ >> DOWNLOAD
password >> htayhlaingoo
- download လုပ်၍ရလာသော U8812D_root_by_HtayHlaingOo.rar ကို ဖြေလိုက်ပါ။ အထဲမှာ အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံအတိုင်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
(၁) Driver သွင်းနည်း
– ဖုန်းရဲ့ battery ကို ၁၅ စက္ကန့်လောက် ဖြုတ်ထားပါ။ ပြီးလျှင် ပြန်တပ်ပြီး computer နှင့် usb ကြိုးမှ တဆင့်ချိတ်လိုက်ပါ။ မိမိ တို့ ကွန်ပျူတာမှာ Driver တောင်းပါလိမ့်မယ်။
ကဲဒါဆို ဘယ်လို driver သွင်းလဲ ဆက်ပြောပါမယ်။ “Device Manager”ကို ခေါ်လိုက်ပါ။ (devmgmt.msc) ထို့ နောက် Other devices ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အ၀ါရောင် အမှတ်အသားလေးနဲ့ ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။
ထို အမှတ်အသားလေးပေါ်သို့Right Click >> Update Driver ဖြင့်“Browse my computer for driver software” ကိုရွေးပေးပါ။
ထို့နောက် မိမိ တို့zip ဖြည်ထားသော folder 6575驱动 > USB VCOM Driver > နောက်က ကိုယ့် ကွန်ပျူတာရဲ့ window အမျိုးအစားပေါ်လိုက်ပြီး ရွေးပေးပါ။
Warning Box ပေါ်လာခဲ့လျှင် “Install this driver software anyway” ကိုရွေးပေးရပါမယ်။Windows has successfully updated your driver software” လို့ပေါ်လာရင် Driver သွင်းတဲ့အဆင့်ပြီးပါပြီ။
(၂) CWM သွင်းနည်း နှင့် Root လုပ်နိုင်သည့် kernel ချိန်းနည်း
- driver သွင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ CWM သွင်းပါမယ်။ ဒေါင်းလို့ရတဲ့ SP_Flash_Tool_v3.1220.01 folder ထဲက Flash_tool.exe ကို run လိုက်ပါ။ အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်းတွေ့ရပါလ်ိမ့်မယ်။
– ပုံမှာ ပြထားတဲ့ နေရာကို click လိုက်ပြီး MT6575_Android_scatter_emmc.txt ကိုရွေးလိုက်ပါ။ အောက်မှာပြထားတဲ့ ပုံအတိုင်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
– အဲဒီနေရာမှာတော့ ရွေးစရာ သုံးမျိုးရှိပါတယ်။
(က) root ပဲလုပ်မှာလား
(ခ) CWM ပဲသွင်းမှာလား
(က) root ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ BOOTIMG နေရာတစ်ခုတည်းမှာ အမှန်ခြစ်ထားပါ။
(ခ) CWM ပဲသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ RECOVERY နေရာတစ်ခုတည်းမှာ အမှန်ခြစ်ထားပါ။
(ဂ) နှစ်ခုစလုံး လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်ခုစလုံးလို အမှန်ခြစ်ထားပါ။
- ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာရွေးချယ်ပြီးရင်တော့ ပုံမှာပြထားတဲ့ download ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Not All images are correctly loaded ဆိုတဲ့ စာ ပေါ်လာရင် Yes ကို ရွေးပေးပါ။
– ဖုန်းရဲ့ battery ကို ၁၅ စက္ကန့်လောက် ဖြုတ်ထားပါ။ ပြီးလျှင် ပြန်တပ်ပြီး computer နှင့် usb ကြိုးမှ တဆင့်ချိတ်လိုက်ပါ။
– စတင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အရင်ဆုံး အနီရောင်ပြေးပါမယ်။ ပြီးလျှင် အ၀ါရောင်ပြေးပါမယ်။ နောက်ဆုံးပြီးရင်တော့ အစိမ်းရောင်ဖြင့် download ok ဆိုတဲ့ box တစ်ခု ကျလာပါလိမ့်မယ်။
– အခုဆိုရင်တော့ ဖုန်းကို ဖြုတ်ပြီး ကြည့်လိုက်ပါ။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို လုပ်လို့ရပါပြီ။
CWM သွင်းတာကတော့ ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီ။ သို့သော်လည်း root လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နှစ်သက်ရာ root tool နဲ့ root လုပ်လို့ရပါပြီ။ Unlock Root
_ CWM သွင်းပြီး မြန်မာဖောင့်ထည့်ချင်တဲ့သူများကတော့ CWM သွင်းပြီးပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်းကို ဒီနေရာ မှာသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ရေးတဲ့အချိန် 5:46 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
SuperSU Pro v0.97 APK
Super User Version အသစ် ဖြစ်ပါတယ်
အရင် icon တွေ နဲ့ မတူပဲ တစ်မူ ထူးခြားတဲ့ icon လေးနဲ့ ထွက်ရှိလာပါတယ်..
အကယ်၍ သင့်ဖုန်းက Root ဖြစ်ပြီး Super User Acess မရခဲ့ဘူးဆိုရင်
ဒီ Super User လေး ကို install လုပ်ပေးလိုက်ပါ
ရေးတဲ့အချိန် 5:43 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်အခြေအနေကိုသိနိုင်ဖို့တိုင်းတာလိုက်ရအောင်.....Ugly Meter (Android)
ကိုယ်ရဲ့ရုပ်ရည်ကို စစ်ဆေးဖို့အတွက် App တစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်......
Ugly Meter.apk (BOX)
Ugly Meter.apk (Drop Box)
Photo Edit ၀ါသနာပါသူများအတွက် သင့်တော်မယ့်
Photo Shake Pro ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေး ဖြစ်ပါတယ်
Android ဖုန်းများအတွင်း ရှိတဲ့ Photo များကို ဖြတ်ဆက် စာတန်းထိုးပေးတဲ့
အပြင် အခြား Eff များစွာလဲ ပါဝင်ပါသေးတယ်...
အောက်ပါ Link မှာ Download ဆွဲ သုံးကြည့်ပါနော်...
ရေးတဲ့အချိန် 5:33 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
သရဲ ကြောက်တက်တဲ့ သူတွေကို စနောက်ဖို့
အကောင်းဆုံး သရဲခေါ်သံ APP လေးပါပဲ...
သူက Timer လေးပေးပြီး ကိုယ်ခေါ်စေချင်တဲ့
အချိန်မှာ ဖုန်းဝင်လာပါမယ် အဲ့ဒီအခါကျရင်
အနားမှာ ရှိတဲ့ နောက်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းကို ပေးကိုင် လိုက်ပါ ကြောက်မက်ဖွယ် အသံနဲ့ စကားပြောပြီး ရယ်သံတွေ ငိုသံတွေ ပေါ်လာပြီးတော့ ဖုန်းက တုန်လာပါလိမ့်မယ်...
သတိပြုရန် ကတော့ ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့
သူတွေကို မစ ပါနှင့် နှလုံးရောဂါ အခံရှိသူများ
ရေးတဲ့အချိန် 5:31 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
မိမိ ရဲ့ Android ဖုန်းဟာ Ring Tone တစ်ခုပဲ ရနေတယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်လေစရာပဲပေါ့နော်...
ချစ်သူ ဆီကလာရင် အသံ တစ်မျိုး အမေ ဆီက လာရင် အသံ တစ်မျိုး မထားချင်ဘူးလား..?
ဒီ Group Ringtone လေးကိုသာ သုံးလိုက်ပါ သင့်စိတ်တိုင်းကျစေမှာပါ...
ရေးတဲ့အချိန် 5:26 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
ဖုန်းမှာ Video Ring Tone မရဘူးလားလို့ လာမေးနေတဲ့
သူတွေ အတွက် ရှိတော့ ရှိတာပေါ့ ဒီမှာ
ဖုန်းနံပါတ် အများကြီးကို Ring Tone တစ်ခုစီလဲ ထားလို့ရသေးတယ်နော်...
Author :Alexey Demov
Requirements : Android 2.2 or higher
Video Caller Id (Free) 1.11.06's Screenshots
ရေးတဲ့အချိန် 5:23 PM No comments: ရေးသားသူ လုလင်ပျို(မိန်းမဆိုးအမုန်း)
U8812D ကို Root မလုပ်ပဲ မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း နှင့်...
Android Phones အတွက် Kingsoft 2012
ဖုန်းကနေတစ်ဆင့်ကွန်ပျူတာနဲ့ Internet ချိတ်ရာမှာ မြ...
ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ရတဲ့ Android ဖုန်းဆော့ဝဲတော်တော်များမ...
Android ဖုန်းရဲ့ File System/Root Directory ကိုကွန...
NoBloat v1.3.3 for Android
Private DIARY v4.3 for Android
Tagy v2.13 for Android
Shwebook အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန် v1.0 for Android
SMS For MM (မြန်မာ SMS) for Android
Android User များအတွက် အံ့ဖွယ် ROM ToolBox Pro
Android Phone ရဲ့ Notification Bar မှာ နာမည်နဲ့ အေ...
App2zip Pro v1.03 for Android (Full Version)
Email4mm (မြန်မာစာထည့်သွင်းထားရန်မလို)
GSM ဖုန်းများတွင် ငွေလွှဲပြောင်း ပေးပို့နိုင်မည်
မြန်မာထီပေါက်စဉ် (Myanmar Lottery) for Android
Maverick Offline Map for android
မြန်မာဖောင့်သွင်းစရာမလိုဘဲ Website တွေကို မြန်မာစာ...
Download from google app store to pc
Android သုံး တဲ့ သူ တွေ အတွက် Offline Map အသုံးပြု...
တံခါးတွေဖွင့်ကြမယ် Doors&Rooms 1.0.1
PC ပေါ်မှာဆော့လို့အားမရတော့ဘဲ Android ပေါ်မှာဆော့ချင...
Robbery Bob ဆိုတဲ့ ဖောက်ထွင်းသူခိုးဂိမ်းလာပြီနော်
ငလျင် နဲ့ ဆိုင် တဲ့ Android ဆော့ဝ် များ
Top 10 စာရင်းဝင် Burger
ဖုန်းထဲရောက်လာမယ့် စွယ်စုံကျမ်း( Wiki Encyclopedia...
ဖုန်းကို ပါးစပ်နဲ့ခိုင်းမယ် S Voice For any device...
Android Phone ကို ဂီတတီးဝိုင်းကြီးအဖြစ် ပြောင်းချင...
Android ဖုန်းမှာ Photoshop သုံးချင်သူများအတွက် Pho...
ဖုန်း Ringtone လေးတွေပါ
ဖုန်းကိုလက်နဲ့ထိစရာမလိုဘဲ silent လုပ်လို့ရတဲ့ soft...
မလေးရှားက maxis လိုင်းသုံးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်မိ...
Android os ဖုန်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် နှင့် ပြုပြင်နည်း...
Easy root လုပ်နည်း
ကွန်ပြူတာပေါ်မှာ Android ဖုန်းလေးသုံးရအောင်
Android ဖုန်းတွေအတွက် တကယ့်ဆော့ဝဲအလန်းစားလေးပါ။ ...
ဖုန်းလာရင် Flash မီးလေး နဲ့အချက်ပြကြမယ်
Android ဖုန်း အားလုံးအတွက် Recovery Mode ၀င်နည်း
android ဖုန်းမှာ skype ထည့်ရအောင်
ဖုန်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို လျင်မြန်သွက်လက်လာစေမယ့် ...
PicShop – Photo Editor v2.4.0 For Android
Wiki Encyclopedia Pro v2.74 for Android အားရယူရန်
အရုပ်ဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့ဂိမ်း For Android 12MB
My Setting Pro v1.9.9 for Android
Huawei U8850 ကို root လုပ်နည်း
Android ဖုန်းမှာ Golf ရိုက်ချင်သူများအတွက်
Photo Montager Full v2 For Android
Android ဖုန်းတွေနဲ့ ကွန်ပြူတာကြားက ပေါင်းကူးတံတားေ...
NETWORK V 1.1.APK
bluetooth ထက်အရမ်းမြန်တဲ့ software လာပြီ
Samsung Galaxy Gio S5660 ကို original fireware တင်...
samsung galaxy တွေကို speed dial setting ခေါ်မယ်
Huawei C8812 ROOT လုပ်နည်း၊ မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်း။...
လိုင်းဖုန်း(အိမ်ဖုန်း)နံပါတ်သိရုံနဲ့ပိုင်ရှင်နာမ...
android ပေါ်မှာ သင့်မျက်နှာကို ခနာကိုယ် အလန်းလေးတွေ...
တစ်ခါသုံး Prepaid ကတ်များတွင် ငွေထပ်မံဖြည့်ပေါင်းန...
Android Device များပေါ်တွင် Ubuntu OS ကိုထည့်သွင်းပ...
Proximity Talk ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုပုံ